Dhurwaa Adhiga Eebbaa leh
Xuseen-dhiqle iyo Sayid Maxamed
Maalku wuxuu ka mid ahaa salabku ay Daraawiishtu adeegsato si ay gumaysiga uga kiciso geyiga Soomaaliyeed. Mar gaadiid ayuu u ahaa oo meesha diyaaradaha iyo dabaabaadka dagaalku Ingiriis iyo Talyaaniga ugu jireen ayey fardaha iyo awrtu Daraawiishta ugu jireen. Mar miisaaniyad iyo saad ciidanka Daraawiishtu ku nool yahay ayuu ahaa. Mar guno siyaasadeed ayuu Sayidku u bixin jiray oo qofkii uu doonayo inuu sasabto ayuu xeryaha u buuxin jiray.
Xilli kasta waxaa xarunta Daraawiishta buuxay xoollo badan oo nooc walba leh. Run ahaantii tabta dagaalka ee Daraawiishta waxaa laga garan karaa inay mar walba xeerinayaan oo degaansanayaan meelaha xooluhu ku tanaadaan. Degaanada aan carro-sanka ahayn, qaniinka leh ama xooluhu ku ba’aan oo dhan way iska ilaalin jireen.
Doollo markii ay Daraawiishtu ku dhaqnayd geel aad u tiro badan ayaa gacantooda ku jiray. Xilligii ay Nugaal deganaydna waxay dhaqdeen fardo iyo adhi aad u badan. Labadaa degaanba waxay caan ku kala yihiin saddexdaa nooc ee xoolaha ka midka ah.
Haddaba Daraawiish oo degan meesha la yidhaahdo Galingaalle oo degaanka Ayl hoostaga ku jirta, adhi badanna haysata, ayaa waxaa adhigii sutida u qabtay dhurwaa. Maalinba dhawr ayuu cunaa. Gabadh gabdhihii adhiga raacayey ka mid ah ayaa is tidhi sidan laguma jiri karo ee odayaasha Daraawiishta waa in arinta loo gudbiyaa si talo loo helo. Waxay u tagtay Xuseen Maxmuud Faarax, Xuseen-dhiqle, oo madaxda Daraawiishta ku jiray, waxayna ku tidhi adeerow adhigii waraabe ayaa nag ka dhigay ee maxaan yeelaa?
Isagoo is leh fariinta gabadhu yeysan adiga uun kugu koobnaanin ee Daraawiish iyo waxgaradkeedaba ha gaadho ayuu Xuseen-dhiqle gabadhii wuxuu ku yidhi, oo adeer dhurwaaga maxaad ugu odhan wayday:
Eebbiyo Ustaadkaa leh
Oo niman dableyaa leh
Oo niman ku dili baa leh
Waa niman Daraawiisha
Gaaciye Mataan baa leh
Geeraarshihii baa leh
Laba Ilma Garaadaa leh
Cabdalle Suldaan baa leh
Carab galacya dheerbaa leh
Cumar Daba-gabooyaa leh
Joofey Jiriidhbaa leh
Inantii caddayd baa leh
Cawrala Dabey baa leh
Suubanoon samrayn baa leh
Samawadoo ka daranbaa leh
Yaan gamas laguu qarine
Gablamow isaga leexo.
Geeraarkaa Xuseen-dhiqle ayaa xaruntii ku faafay. Aad baa loo jeclaystay oo waliba loogu majaajilaystay. Sayidku wuxuu ahaa nin fursadda gabayga iyo maansada oo dhan sida looga faa'iidaysto aad u yaqaana. Wuxuu is yidhi majaajiladaa iyo sheekadaa saaqday xarunta iyo dareenka dariiqada ee uu geeraarka Xuseen-dhiqle kasbaday ka faa'iidayso, wuxuuna tiriyey mid kaa kore jawaab u ah.
Sayidku ugu horraynba wuxuu bidhaansaday meesha ugu dhibka yar ee geeraarka Xuseen laga dhaliili karo ama laga naqdin karo. Wuxuu tusay inuu ka xumaaday labada meeris ee geeraarka Xuseen-dhiqle ugu horreeya ee ah: Dhurwaa adhiga Eebbaa leh, Eebbiyo Ustaadkaa leh. Alle sideed qof wax ula wadaajin kartaa, weeye gundhaca cadhadiisu. Haddaba halkaa ayuu ka duulay wuxuuna iska dhigay sidii nin afhayeen u ah dhurwaa dhuruq dhaylo dhallaanka cabsiiye.
Caadiyan, gabayga iyo geeraarka Sayidku mar walba siyaasad kama madhnaan jirin, midkana arimo siyaasadeed ayaa tif ka ah oo uu ku muujinayaa. Wuxuu yidhi Sayidku isagoo fariintii waraabaha soo gudbinaya:
Xeseenow aqoon xume eraybaan ku leeyahy
Awal horre haddaad tidhi Eebbaa adduunka leh
Eegana maxow tidhi annagaa adhyowga leh
Inaad laba aflaysaa ma anfici karaysaa
Ma Alloo kalaad tahay mise waad ka adag tahay
War ma adaa ardaalyahow arsuqayga celin kara
Adba wuu ku uumaye ma anaan abuurrayn
Mise aniyo adigaa Eebbe weyne kala xiga
Ayaantaan afuro helo maxaad uga umlaysaa
Illeen waa Abraahiin aaqibo ku diinkiis
Mise waa Ogaadeen aflagaadadiisii
Mise waa Il-jeexiyo umuurtuu ku kici jiray
Gaaciyoo aboodiya ma aabaan ka leeyahay
Haddii uu Islaan yahay Ingiriis ma aadeen
Oo inamadiisii agoon uguma taliyeen
Cumar waa abootee miyuu ii olmomayaa
Joofeyga odayga ah miyuu orod holaayaa
Cabdul eebo kollay tahay miyuu aalad leeyahay
Inta kaloo aad sheegtayna waa oryo naaga ah
Adigana urruufyahow anigaaba kaa adag
Aw iyo Majeerteen waa ina adeerkay
Tan iyo aamanuudii Ilig baan fadhiyi jiray
Abtirsiinyahayguna waa Reer Ugaadh Cumar
Adigana adoogaa Uubataaluu lahaan jiray
Haddaad aamin doon tahay orodoo aayar iga guur
Haddii kale ha ooyine adkaysaan ku leeyahay.
Dhagayso labada geeraarba
Waxaan dhugtay Diiwaanka Gabayadii Sayid Maxamed Cabdille Xasan ee uu qoray Aw Jaamac Cumar Ciise si aan meelaha qaarkood u saxo.
 Gaaciye Mataan Faarax wuxuu ahaa farsamo yaqaankii Daraawiishta
 Xuseen-dhiqle naftiisa weeye
 Ilma Garaad Cali, Dhulbahante, oo dariiqada ka mid ahaa ayuu u jeedaa
 Cabdul Suldaan Cilmi Xaasey. Suldaan caan ahaa oo waliba wadani ahaa oo ka dhashay tol tololka Doollo dega ka mid ah oo uu Ingiriis ku dilay Ceeldheer sanadkii 1919kii
 Joofey Cali Jidhiidh, Darwiish qudhiisu Doollo kasoo jeeda ayuu ahaa
 Joofey haweenaydii u dhaxday inay ahayd ayaa lagu sheegay
 Abraahiin, Makaahiil, Ogaadeen. Waa lafta Xuseen-dhiqle yahay
 Ogaadeen tolka kore ee Sayidka iyo Xuseen-dhiqleba ku arooraan
 Il-jeex: Xuseen Yuusuf Xirsi Dalal, Ogaadeen, Reer Cabdille, Reer Warfaa. Sayidka iyo Xuseen colbay ahaayeen, Sayidkuna aad ayuu ugu halqabsan jiray
 Waa ceel todobadda Doollood ka mid ah oo u dhexeeya Wardheer iyo Waafdhuug